Airbus A380, ny lehibe indrindra | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | fiaramanidina, mpitarika
Ny fiaramanidina Airbus A380 Tsy iza izany fa ilay fiaramanidina goavambe izay mamakivaky ny habakabaka amin'ny vatany misy taolana roa ary mitazona ny anarana ny fiaramanidina ara-barotra lehibe indrindra eto an-tany. Farafaharatsiny farafaharatsiny, satria misy ny resaka Airbus A350-1000 ...
Ny zava-misy dia mety efa nanana vintana niondrana an-tsambo ny iray amin'ireo sambo mpitondra ambony ireo ianao, na tsia. Ireo fiaramanidina ireo dia tsy manao ny làlana rehetra ary tsy ny zotram-piaramanidina rehetra no manana izany. Amin'ny herintaona dia hiverina any Japon aho ary rehefa mandeha any Emirates any Dubai aho dia hiakatra amin'ny Airbus A380 mankany Tokyo. Dia inona! Izany no antony anolorako hevitra anio hahalala azy bebe kokoa ary raha tianao ny fiaramanidina sy ny dia, dia tandremo izany fampahalalana momba ny Airbus A380.
Izany dia Orinasa eropeana mpanamboatra fiaramanidina izay natokana ho an'ny fiaramanidina ara-barotra sy ara-miaramila, na dia avo aza ny isan-jaton'ny voalohany. Ny foibe dia any Frantsa, saingy satria misy orinasa iraisampirenena dia misy birao any Espana, Alemana, Royaume-Uni, Etazonia ary Sina. Toy ny mahazatra ankehitriny amin'ny fanatontoloana, ny orinasa samy hafa dia samy manana ny anjarany avy eo avy eo mivory ny zava-drehetra.
Ny iray amin'ireo harena sarobidy ao dia ny Airbus A320, novokarina tamina singa 10 tsy misy mihoatra ary tsy misy zavatra kely noho izany. Ity modely ity nahavita sidina mihoatra ny 100 tapitrisa izy ary nitondra mpandeha 12 miliara. Tarehimarika inona! Mazava ho azy, iray amin'ireo mpifaninana lehibe indrindra aminy ny Boeing (ny A320 dia mifaninana mivantana amin'ny Boeing 737), na dia nahafaly ny orinasa hatramin'ny nanombohan'ny taonjato faha-50 aza dia navela teo amin'ny XNUMX% ny tsenan'orinasa an-dranomasina. Tsy misy ratsy.
Ny fiaramanidina sivily voalohany dia ny A300 kely, narahin'ny A310 ary noho ny fahombiazan'ny varotra dia teraka ny A320, ilay malaza indrindra amin'ireo maodeliny rehetra.
Double deck, mivelatra be, maotera jet efatra. Raha vantany vao eny an-tsena, ny sasany amin'ireo seranam-piaramanidina eran-tany dia tsy maintsy nanatsara ny fotodrafitrasan'izy ireo mba hahazoany mandray izany. Izy io dia nanana sidina voalohany tamin'ny 2005 ary niditra tao amin'ny serivisy ara-barotra roa taona taty aoriana, izany hoe efa manana folo taona amin'ny rivotra.
Manana izany Kabine 550 metatra, habaka azo ampiasaina rehetra, 40% mihoatra ny Boeing 747. Manana izany fahaizan'ny mpandeha 853 eo anelanelan'ny Kilasy toekarena sy ny kilasy fahatelo, na dia miankina amin'ny takian'ny zotram-piaramanidina aza ny fizarana arakaraka ny kilasy. Afaka manidina 15.700 XNUMX kilometatra eo ho eo izy io amin'ny ankapobeny manarona ny lalam-barotra lava indrindra amin'ny hafainganam-pandehanana 900 km / ora. Ny fanovana sasany dia namboarina taminy tao anatin'ny taona vitsivitsy, amin'ny fiaramanidina, ny motera ary ny fahafahan'ny fitaterana.
Manana maotera Rolls-Royce, Modely samihafa arakaraka ny fiovan'ny fiaramanidina, izay ahafahanao mitazona ny fandotoana ny tabataba. Ny fuselage dia vita amin'ny firaka aliminiomaoy ao amin'ny elatra ampiasaina indrindra amin'ny fibre karbaona nohamafisina tamin'ny plastika sy fiberglass ary plastika nohamafisin'ny fibre quartz.
Na dia toa mivoatra aza ny mpandimby azy dia mbola voatendry sy amidy ihany io maodely io. Ny hafaliako, satria mpandeha matetika aho Emirates ary ity orinasa arabo ity no nividy fiaramanidina marobe amin'ity maodely ity. Manana 97 ny trosany!
Ankehitriny, hatreto dia teknika loatra ny zava-drehetra fa andao jerena izay mahaliana antsika izao: ny toeran'ny mpandeha! Nilaza ny orinasa fa nieritreritra be ireo injeniera momba ny fanaovana ny dia ho mahafinaritra kokoa ho an'ny mpandeha. Nahavita an'izany izy ireo mampihena ny tabataba amin'ny 50% miaraka amin'ny fanindriana tsara kokoa, napetrak'izy ireo varavarankely lehibe kokoa, arimoara lehibe kokoa eo amin'ny seza ary seza ahazoana aina kokoa.
La Kilasy voalohany somary tsy azo tratrarina fa manana ireto cabins lafo vidy ireto 12 metatra toradroa, fa tsy mandeha lavitra Toeram-pianarana Economy dia 48 santimetatra ny sakany (manohitra eo anelanelan'ny 40, 40 na mihoatra orinasa hafa). Ny takelaka roa an'ny fiaramanidina dia mifandray amin'ny tohatra roa lehibe ka afaka miakatra na midina mifanila ireo mpandeha roa.
Ny rafitry ny jiro dia miaraka taratra jiro izay azo ovaina mba hamoronana "toetrandro" sy hanahafana ny andro sy ny alina ary ireo ora eo anelanelany. Rehefa lava be ny dia dia ilaina ny mamorona ireo fotoana ireo ary manery fiatoana sy sakafo. Ny marina dia ny orinasa koa dia niandraikitra fampiroboroboana zavatra izay tsy tazana tamin'ny fiaramanidina hatramin'ny taona 70: Salons hatsaran-tarehy, trano fisakafoanana, fisotroana, fivarotana ary araka ny efa fantatrao, efitra fandroana misy fandroana ho an'ny Kilasy voalohany.
Mampiroborobo zavatra maro ny orinasa ary avy eo mangataka ny azy ireo ny seranam-piaramanidina, izay azo atao indraindray nefa indraindray tsy izany, izany no antony ilay Airbus A380 ihany dia mety ho hafa raha tompon'ny Emirates, Singapore Airlines na Air France. Fa efa akaiky kokoa ve ny fotoana mirentirenty kokoa? Tsia ny valiny. Mety ho mahafinaritra ny mandeha toy izao amin'ny fiaramanidina, fa raha ny marina dia vitsy dia vitsy ny olona afaka mividy azy ary ny folo izay mandeha ao amin'ny First dia tsy azo ampitahaina amin'ireo 500 mahery izay manao izany amin'ny Economy.
Noho izany, ny fironana dia ny fanatsarana miandalana ny serivisy na ny mampiavaka ny Kilasy Toekarena. Haleloia! Aorian'izany rehetra izany, efa nanontany tena ve ianao ohatrinona ny vidin'ny Airbus A380? Tamin'ny taon-dasa dia ny vidin'ny lisitra 432.6 tapitrisa dolara na dia nilaza aza izy ireo fa tratra ny fifampiraharahana amin'ny alàlan'ny fihenam-bidy lehibe.
Singapure Airlines, Emirates, Qantas, Lufthansa, Air France, Korean Air, China Southerne, Thai Airways, Malaysia, British Airways, Asiana, Qatar ary Etihad Airways no orinasa manana an'ireny fiaramanidina kely ireny. Raha ny làlana fohy indrindra nataon'i Airbus A380 dia avy any Paris ka hatrany Londres, ny lava indrindra dia ilay mampitohy an'i Dubai sy Auckland: 14 kilometatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » fiaramanidina » Airbus A380, ny lehibe indrindra amin'ny rehetra
Ahoana ny fivezivezena mandritra ny herinandro iray amin'ny kitapo entina tokana